Ezemidlalo athletics bebelokhu ethandwa njalo kubantu asebekhulile futhi abasha. Lokhu akusona isimanga. Kodwa kaningi e abasubathi, ikakhulukazi Wabasaqalayo, nawu umbuzo: "Indlela ukwakha triceps dumbbell?"
Ukwanda lokhu imisipha - umgomo oyifunayo kwanoma iyiphi umsubathi. Ngemva imisipha impumuzo njalo abatshazwe. Kodwa imisipha ukuthuthukisa ngokuvumelanayo kuphela uma kwenzeka ukuthi bonke imisipha ukuba zivuleka. Uma ufuna uthole izandla zakho wadonsela nemibono yabanye, ungasiza ukuba eziyinkimbinkimbi umzimba triceps.
Omunye izivivinyo iyona cindezela French. Uma sikhuluma zabuna uhlobo, ukukhishwa lesi sivivinyo kuhilela nokubamba dumbbell ngemuva ikhanda lakho ngezandla zombili futhi ecindezela kamuva ukuqedela izingalo eqondisa ngesikhathi izindololwane. Kodwa le ndlela akazange ubanjwe on, ngoba kahle, ngakho ebhentshini ngokuvamile eyenziwa ngesandla esisodwa.
Ingabe etuswayo ukwenza lesi sivivinyo ehlezi, khona-ke kumelwe athathe dumbbell isisindo kancane ukudambisa umthwalo phezu emgogodleni. Uma uphelelwa, qiniseka ukuthi entendeni zibheke phezulu nentamo dumbbell ukuphepha ukuyona izithupha, uma ngawakhamela dumbbells izandla zombili. Qaphela ukuthi kusukela ungalanda triceps ekhaya. Phela, le ndaba akudingi izakhiwo ezikhethekile kanye nemishini.
Qondisa izingalo nge dumbbells e emthambekeni
Kanjani ukwakha triceps dumbbell ngezinye izindlela? Zama lesi sivivinyo elula.
Ukuncika phambili, encike ngesandla ebhentshini kwedolo. Ingalo okuphambene nge dumbbell aqhele ukuze ezingeni ne ehlombe. Khona-ke ugobisela ingalo yakho endololwaneni engela kwesokudla, bese qondanisa ngengalo isikhundla ngqo. Nalapha futhi ungagobisi ingalo bese qondanisa. Yenza umsebenzi okufanayo Ngakolunye uhlangothi. Ukunakwa: azelule ngokugcwele futhi kunciphisa triceps. Akufanele anciphise uhla motion. Lokhu ukuzivocavoca imithwalo kuhle lo triceps, kodwa ngoba wenziwa yanjalo ngezandla zombili, amandla esichithwa kabili.
isandiso triceps ebhentshini
Manje uyazi ukuthi ukumpompa up triceps dumbbell. Kukhona umsebenzi wenziwa ngaphandle dumbbells, kodwa ukusebenza yayo iphakeme kakhulu.
amabhentshi amabili kufanele ibekwe kude kangaka, ukuthi ubeka ngomlenze owodwa, kanye nezinye waphumula izandla emuva akhe dlulile. Emabhulashini kufanele kubekwe at ububanzi ehlombe. Kancane kancane wehlise ngokwakho phansi, esisuka triceps, bese zenyuka ngokushesha bakhuphuke, eqondisa izindololwane zakho.
Ukuze wenze lokhu umsebenzi ngokomthetho kweqiniso, alandele imithetho ethile. Kufanele kwehliswe njengoba low ngangokunokwenzeka ukuze welule imisipha ngangokunokwenzeka. abasubathi abaningi, enza lokhu, sebenzisa izinsimbi extra agqoke hip ezihlukahlukene izinto. Lokhu kwenziwa ukuze aqinise umthwalo imisipha. Kodwa eqinisweni kungelula futhi iyingozi. Futhi kunzima kakhulu ukugcina ukulinganisela esimweni esinjalo. Ngokwenza lo msebenzi, umuntu angasebenzisa isisindo esengeziwe ngokulinganisela.
Isihloko esichaza indlela ukumpompa triceps zisindo ngaphandle kwabo ekhaya ngaphandle kokusebenzisa imishini ekhethekile. Eqinisweni, kunezindlela eziningi umzimba for ukuthuthukiswa kwe-triceps, kepha kumele enze in ejimini. Ngaphezu kwalokho, ngokwenza ebhentshini, kubalulekile ukulandela inqubo, ngoba umphumela incike.
Idlalwa kanjani ezemidlalo emakhaya isikhungo imfanelo?
Ukufaneleka club "Fitkervs": ukubuyekezwa. Amandla School "Fitkervs": Izibuyekezo
Lokwahlulela - lolu hlobo ukwahlulela .... izahlulelo elula
IWundlu ebhodweni - ithenda futhi esihlwabusayo
"Ngaphambi-Suite": kafushane otchechestvennogo imoto
Dream Ukuhunyushwa: obomvu rose. Incazelo incazelo yaleli phupho
Okumele zikhokhelwe ku-balance sheet - Iyini? Ibhalansi ye okumele zikhokhelwe kanye Receivables